Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya oo Jubbada Hoose ku dagaalamay | Keydmedia
Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya oo Jubbada Hoose ku dagaalamay
Dagaalka oo ahaa mid u dhaxeeyay ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya - Koox ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa weerar dhabba gal ku qaaday Kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ka soo baxay degmada Afmadow ee gobolka jubbada Hoos, kuna sii jeeday dhinaca xuduudda.
Dagaalka ayaa ahaa mid xooggan oo saacado qaatay, waxaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona dadka deegaanka sheegayaan in ay maqlayeen daryanka madaafiic iyo rasaas ay labada dhinac isku ridayeen.
Dagaalamaayasha Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in ay weerarka ku bilaabeen qaraxyo Miinooyin ah ay wadda ku aaseen, waxaana xigay dagaal fool ka fool ah oo sababay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, walow aan tira koob rasmi ah la sheegin.
Ciidamada Kenya ayaa la sheegayaa in heleen gurmad kaga imaaday dhinaca degmada Afmadow, waxaana markii dambe si iskiis ah u istaagay dagaalka kadib markii dagaalyahannadii Shabaabka ee weerarka soo qaaday ay dib u gurusho sameeyeen.
Ilaa hadda si sax looma oga khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac, sidoo kale majiro wax war oo ka soo baxay Alshabaab iyo ciidamada Kenya.